50W LED Floodlight - တရုတ် Faceled နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှလက်ကား
အလင်းအား flux: 80 LM / W ကို
အိုင်ပီခဲ့သည် Rating: 65
Up ကို 80 LM / W ကို, 70W MH floodlight များအတွက်အစားထိုး။
90 & deg; floodlighting application များအတွက်စံပြရောင်ခြည်, ။
Die-ပစ်ချလူမီနီယမ်အိမ်ရာ, polyester အမှုန့်, ချေးခံနိုင်ရည် finish ကိုခြယ်။
အနည်းဆုံးတောက်ပနှင့်အတူပျော့ပျောင်းသောအလင်းကိုထုတ်လုပ်, ဖန်မှန်ဘီလူး, နှင်းခဲစနစ်ဖြစ်ပြီး။
ကျယ်ပြန့် AC အ input ကိုအကွာအဝေး, 100-240V AC အ, 50 / 60Hz ။
နိမ့်စွမ်းအင်ကို floodlight အစားထိုးဘို့, LED floodlights စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နေအိမ်များများအတွက်တကယ်ကြီးမြတ်အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အဆိုပါစွမ်းအင်ကိုချွေတာတကယ်အံ့ဖှယျဖြစ်ပါတယ်နှင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များလှိမ့်ဖို့ဆက်ပြီးအဖြစ်ပိုပြီးတတ်နိုင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတစ်ရိုးရှင်းသော LED floodlights ပြောင်းလဲနေတဲ့ထက်အဘယျသို့ပိုကောင်းလမ်းကိုလျှော့ချ၌အကြှနျုပျတို့၏စိတျအပိုငျးလုပ်ဖို့!
ယခု မှစ. သင်တော့ဘူးမြင့်မားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဥပဒေကြမ်းဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေလွှမ်းမိုးအလင်းအိမ်တင်းကြပ်စွာအီး, Rohs ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စက်ရုံမထွက်ခွာမီပြီးပြည့်စုံသောစနစ်များအားဖြင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်တွေ, အညီထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။
ကြင်နာစွာသတိပြုပါ: ကျနော်တို့အီးယူ Adapter ကမပေးပါဘူး။ သငျသညျဥရောပနိုင်ငံတွေကနေလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ပြည်တွင်းဖြစ် Adapter ကမဝယ်ပါသေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ floodlights trarding စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောကေ plug ကိုအတူဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်တပ်ဆင်ရန်တစ် techinician ဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဖျူးနှင့်အတူကို Safe! လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခ! သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဝယ်ယနေ့!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ရှုပါ ဂရုတစိုက်နှင့်လက်ျာ MODEL ကိုရွေးချယ်ပါ။ ရှိပါတယ် sensor မရှိဘဲနဲ့ Classic Model နှင့် sensor နဲ့ PIR model ။ သင်လိုအပ်ဘာကိုရွေးချယ်ပါ။ သာ RGB အရောင် 10 30 ကို 50W သည်။
က Round LED Panel ကိုအလင်း
T5 12W led tube Series